I have seen many storms in my life. Most storms have caught me by surprise, so I had to learn very quickly to look further and understand that I am not capable of controlling the weather, to exercise the art of patience and to respect the fury of nature. | Sakar Pone
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာ မုန်တိုင်းအများကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ မုန်တိုင်းတွေ တော်တော်များများဟာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဘဲ ကျွန်တော်ဟာ ရာသီဥတုကို ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်မှန်း နားလည်ခဲ့ပြီး ဒီထက်ပို စောင့်ကြည့်ဖို့၊ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း ပါရမီကို လေ့ကျင့်ဖို့၊ သဘာဝတရားရဲ့ အမျက်ဒေါသကိုလဲ လေးစားဖို့ လျှင်လျှင်မြန်မြန် သင်ယူခဲ့ရပါတော့တယ်။
Category : All Category | Art | Life | Nature |
Chance, Knowledge, Not Available, Positive, Quote of The Day, Success
Freedom, Life, Nature, Quote of The Day
Education, Germany, Life, Quote of The Day
All Category, Life, Motivational, Not Available, Quote of The Day